Mijoroa Wireless Charger
Charger Wireless Magnetika
Charger Wireless lavitra lavitra
Vokatra eo ambanin'ny MFi Certified
Produits Under MFM Certified
Vokatra eo ambanin'ny MFi sy MFM Certified
Fitsapana sy fanombanana ny vokatra
Test & Tombanana ny vokatra
LANTAISI TS30 dia charger fiara tsy misy tariby haingana izay mifanaraka amin'ny fitaovana Qi rehetra izay misy fonony mifanaraka amin'ny Qi.
一、Fandinihana ny fisehoana 1, Eo anoloan'ny boaty Ny boaty eo anoloana banga sy tsotra, dia azo natao ho an'ny mpanjifa OEM. 2, Back of box Ny ao ambadiky ny boaty dia mampiseho ny fampidirana sy ny fepetra mifandraika amin'izany. Ampidiro: DC 5V-2A, DC 9V-1.67A Output: 10W Max. Habe: 116 * 96 * 90mm Loko: □ Mainty □ hafa 3, Sokafy ny boaty Op...
15W Wireless fifadian-kanina Fiara fanombanana charger
nataon'ny admin tamin'ny 21-01-13
Amin'izao fotoana izao, mihamaro ny finday manohana ny teknolojia famandrihana tsy misy tariby, ity fampiasa amin'ny fiampangana tsy misy tariby ity dia mitondra traikefa haingana sy mora ho an'ny mpampiasa. Mba hanamafisana kokoa ny fiasan'ny fiampangana tsy misy tariby, ny mpanamboatra dia miasa mafy amin'ny famandrihana tsy misy tariby ihany koa ...
Takelaka data TS01PU
nataon'ny admin tamin'ny 20-12-24
Amin'izao fotoana izao, mihamaro ny finday manohana ny fampandehanana famandrihana an-tariby tsy misy tariby, izay manome traikefa mora sy haingana ny mpampiasa. Mba hanamafisana kokoa ny fiasan'ny fiampangana tsy misy tariby amin'ny finday, ny mpanamboatra dia niloka ihany koa tamin'ny tsenan'ny famandrihana tsy misy tariby, launc...